क्यान्सर विरुद्ध एकदमै प्रभावकारी फल ८ वर्ष लामो अध्ययन पछि पत्ता लाग्यो के हो त त्यो फल ..? थाहा पाई राखौ - Triveni Online
Home / Health / क्यान्सर विरुद्ध एकदमै प्रभावकारी फल ८ वर्ष लामो अध्ययन पछि पत्ता लाग्यो के हो त त्यो फल ..? थाहा पाई राखौ
Triveni Online July 7, 2018	Health Leaveacomment
यसको प्रयोगले घाँटी, अनुहारको ट्युमर र छालाको क्यान्सरलाई पुरै नष्ट पार्दछ । ‘ब्लुसउड’ रुखमा यो फल फल्ने गर्दछ । यसको बैज्ञानिक नाम ‘हिल्याण्डीया डकरिली’ हो । यसलाई यहाँका स्थानिय जनजातीहरुले ‘एकदमै छिटो काम गर्ने औषधी’को रुपमा चिन्ने गर्दछन् ।
यो फलमा प्राप्त भएको तत्वलाई निकालेर अहिले औषधी बनाइएको छ । र यो औषधि बिरालो, कुकुर र घोडा लगायतका ३०० प्रकारका जनावरहरुमा प्रयोग गरिसकिएको छ ।
यी जनावरहरु सतही खालका क्यान्सरबाट पिडीत थिए । जेसिका भोन्डेरेनका अनुसार ३०० मध्ये ७५ प्रतिशत जनावरहरुको ट्युमर हरायो । बैज्ञानिकहरुका अनुसार यो औषधि जनावरहरुका लागि त एकदमै प्रभावकारी र छिटो पनि छ। पाँच मिनेटमै यसले प्रभावकारी असर देखाउन थाल्छ ।
एक हप्तादेखी १५ दिनसम्ममा ट्युमर पुरै निको भएको देखियो । तर दुखको कुरो यो बेरी जस्तो पायो मौषम र स्थानमा नफल्ने देखिएको छ । रिसर्च टिमका प्रमुख बोय्लेका अनुासर अब छिटै मानवका लागि पनि यो औषधी निर्माण गरिँदै छ । (साइन्सअलर्ट.कम,अष्ट्रेलियाबाट)
Previous सुखमय एव रमाईलो जिवन बनाउन चाहानु हुन्छ भने शनिबारको दिन यसरी पुजा आजा गर्नुहोस अनि यी सामाग्री किनबेच नगर्नुहोस !
Next भगवान शिव र पार्वतीको रोचक कथा ! किन दुःखीलाई जहिले पनि दुःख अनि सुखीलाई जहिले पनि सुख मात्रै मिल्छ ?